Madaxweyne Deni oo balanqaaday in xukuumadiisu mudnaan siin doonto tayaynta hay’adaha dowladiga ah iyo xuquuqda shaqaalaha – Kalfadhi
Madaxweyne Deni oo balanqaaday in xukuumadiisu mudnaan siin doonto tayaynta hay’adaha dowladiga ah iyo xuquuqda shaqaalaha
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa maanta khudbad uu u jeediyay golaha wakiillada wuxuu u sheegay in xukuumadiisu ay xoogga saari doonto tayaynta hay’adaha dowladda iyo ku dhaqanka sharciga iyo qaanuunka.
Xukuumadihii ka horeeyay Deni ayaa lagu eedayn jiray in aysan dhab u wada fulin shuruucda iyo xeerarka deggan, taas oo hoos u dhigtay tayada iyo fulinta hay’adaha dowliga ah ee Puntland; in kastoo shuruuc badan oo asaasi ah la dejiyay 10kii sano ee la soo dhaafay.
Madaxweyne Deni oo khudbad dheer ka horjeediyay golaha ayaa sheegay in mudnaan gaar ah ay siin doonaan in la fuliyo shuruucda diyaarsan. Sidoo kale, wuxuu arrintaas la xiriiriyay in xukuumadiisu doonayso in ay xaqiijiso xuquuqda shaqaalaha, sida uu madaxweynuhu sheegay.
Shaqaalaha hay’adaha dowliga ah ee Puntland iyo ciidamada ayaan si joogta ah u helin mushaaraadkooda, mararka qaarkood waxay waayaan kalabadh marka la isku celceliyo sanadka oo dhan, sida ay xiliyo kala duwan ka sheegeen warbaahinta maxaliga ah mar sii horaysayna looga dooday baarlamanka.
Ujeedada dhaqangelinta sharciga iyo qaanuunka ayaa madaxweynuhu ku fasiray inuu doonayo hay’ado dowli ah oo is korjoogteeya isuna dheelitiran
Golaha wakiillada ayaa maanta si aqlabiyad leh u ansixiyay qorshaha madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo ka kooban 48 xubnood oo leh wasiiro, wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowlayaal.
Xildhibaan uga digay Madaxweyne Farmaajo inuu ku fekero “Muddo Kororsi”
Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir oo ka digtay in Baraha Bulshada la dhex keeno Dacwad Maxkamadeed